Wantoota saxaatoo hedduu gara gareetti akka wanta qeenxeetti isaan fayyadamuu dandeessutti walitti makuun ni danda'ama.
Wantoota garee keessaa hunda walumaan siiqsuu, geeddaruu, hammamtaa jijjiiruu, ciqilchuu, yookiin jijjiiruu ni dandeessa , fi tokkoo tokkoo wantootaa jijjiiruuf garee yeroo kamiyyuu galchuu ni dandeessa.
Amaloota(hammamtaa sararaa, halluu guuti, fi kkf) wantoota garee keessaa hunda walumaan jijjiiruu ni dandeessa, fi garee galchitee tokkoo tokkoo wantootaa jijjiiruu ni dandeessa.
Gareewwan gareewwan biroo keessatti gareewwan uumuuf walitti ta'uus ni danda'u.
Wantoota gurmeessuu barbaaddu wallitti fili. Yommuu tokkoo tokkoo wantootaa cuqaastu Shift gad qabi.
Wantoota filachuuf, goodayyaa filannoo naannoo wantootaa harkisuus ni dandeessa.
Fakkeenyaaf, wantoota hunda asxaa kaampaanii keessaa siiqsuu fi hammamtaa asxaa akka wanta qeenxeetti jijjiiruuf gurmeessuu ni dandeessa.
Wantoota erga gurmeessitee booda, kutaa gareecha kamiyyuu filachuun waamara garee fila.
Amma wanta qeenxee gareecha keessaa filattee gulaaluu ni dandeessa.
Wantoota garee haalata kana keessaa gara gareetti yookiin garee irraa ida'uu yookiin haquu ni dandeessa.
Wantootni kutaa gareechaa hin taane halluuwwan golgolaa tiin agarsiifamu.
Garee keessaa bahuu
Garee Fakkasaa yookiin Toleessaa keessaa bahuuf, bakka kamiyyuu aloo gareecha mirga cuqaasuuus ni dandeessa.
Amma wantoota hundumaa akka tokkoo tokkoo wantootaatti filachuu fi gulaaluu ni dandeessa.
Title is: Gareewwaniin Hojjechuu